DJI Phantom 4: technical uye yekufananidza hunhu | Mahara emahara
DJI Phantom 4: technical uye yekufananidza hunhu
DJI inozivikanwa uye inohwina mubairo Chinese technology technology. Iyo yakatsaurirwa kugadzira uye kugadzira drones yemuchadenga mifananidzo. Hunhu hwayo hwakanakisa uye hunhu hwemhando yega yega yedrone hwaita kuti ive yeinonyanya kudiwa uye inobudirira pamusika. Havasi ivo chete vatungamiriri vekutengesa, ivo zvakare anonyanya kushandiswa kweterevhizheni, basa remimhanzi, indasitiri yemamuvhi yekutora mifananidzo, nezvimwe.
Parizvino inomiririra 70% yemugove wemusika wedrone, uye zvingave zvakati wandei kana ukasefa chete musika wehunyanzvi. Muchokwadi, DJI yakahwina iyo 2017 Tekinoroji & Injiniya Emmy Mubairo yehunyanzvi hwayo hwemakamera akaiswa nemadhoni. Uye kana paine dhoni yemhando inomira kunze, ndiyo Phantom yakateedzana.
1 Chii chandingaishandise uye chii chandisingakwanise kuishandisa?
1.1 Ini ndinofanira kutenga iyo nyanzvi drone?
2 Misiyano nemamwe maDI modhi
3 Phantom 4 hwokugadzira hunhu
3.4 Phantom 4 Yepamberi
3.5 Phantom 4 Yepamberi +
4 Kugadziridza pamusoro peiyo DJI Phantom 3
4.1 Iyo yemberi DJI Phantom 5
Chii chandingaishandise uye chii chandisingakwanise kuishandisa?
DJI drones zvakanyanya yakagadzirirwa kuita kurekodha uye / kana mufananidzo kutora mabasa. Ivo havasi eerodynamic uye akareruka mamodhi emujaho. Saka kana iwe uchitsvaga mujaho drone, DJI haisiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Asi kugadzikana kwayo uye hunhu hwayo inoita kuti ive yakakwana kune amateurs uye nyanzvi kupfura vhidhiyo uye kutora mifananidzo yemuchadenga. Nezve icho chimwe chezvakanakisa zvigadzirwa iwe zvaunogona kuwana.
Dzimwe nguva ini ndakabvunzwawo ndizvo kana uchigona kusimudza huremu, semuenzaniso, kutakura zvinhu zvekununura kana zvekushandisa kunongedza zvisingawanikwe pakununura, nezvimwe. Chokwadi ndechekuti iyo Phantom quadcopter inogona kusimudza mazana mashoma ekuwedzera magiramu, asi haana kugadzirirwa kutakura huremu kupfuura rutsigiro nemidziyo yekutora mifananidzo yavanotakura. Kana iwe ukaibvisa iwe unogona kurodha chimwe chinhu ... Chii chiri chokwadi ndechekuti kune DJI S900 (kana iyo Industrial nhevedzano) ine 6 mafambisi ayo anogona kutakura anosvika mashanu kg, huwandu hwakati wandei.
Mhedziso, kana iwe uchingoda yakanaka drone yekufambisa kana kutora yakanaka mifananidzo, DJI isarudzo yakanaka. Zvekumhanya uye zvimwe zvinangwa, iwe unofanirwa kufunga nezvekuona zvimwe zvakasiyana...
Ini ndinofanira kutenga iyo nyanzvi drone?
Kana iwe uri wekutanga uye hauna kumbobvira waedza imwe, mhinduro ndeyekuti kwete. Iwe unofanirwa kutanga nemhando yakachipa kuti uijairire. Kunyangwe iwe uri nyanzvi yekuzvivaraidza kana nyanzvi, usakahadzika kuti DJI ine zvigadzirwa zvakanakira iwe.
Kana mhinduro iri hongu, unofanira kuzvibvunzawo iyo DJI vhezheni kana modhi yaunoda. Semuenzaniso, kana iwe uchizotora mifananidzo uye vhidhiyo nePhantom, unogona kugadzirisa iyo DJI Phantom 3 Pro kana iwe uri hobbyist. Asi kana iwe uchida chimwe chinhu, ipapo enda wakananga kune imwe yeiyo DJI Phantom 4 shanduro.
Misiyano nemamwe maDI modhi
DJI ine akati wandei mamodheru e gutsa zvakasiyana siyana zvinodiwa nevashandisi vayo. Mhando dzakakurumbira ndeidzi:
DJI Spark: kune wese munhu anotsvaga yakapusa uye yakapusa drone. Yakanaka sarudzo yevanofarira. Izvo zvakachipa uye hazvina kukura zvakanyanya muhukuru, asi hunhu uye tekinoroji ichiri zvakapfuura zvine mutsigo Asi usatarisira mabhenefiti kana matekinoroji ayo mamwe emhando yepamusoro ane ...
DJI Mavic: ivo zvakapetwa kaviri mumutengo kune iyo Spark, saka haisi madroni akadhura. Iyi nhepfenyuro inozivikanwa kwazvo nevateveri vekutenga mifananidzo uye vhidhiyo. Iyo ine dhizaini dhizaini uye nehungwaru nzira dzekubhururuka, ine kuzvimirira kwakanaka, kumhanya, kugadzikana uye kunyarara. Kune akatiwandei edhisheni yedrone iyi, senge Mhepo, Pro, Platinum, nezvimwe.
DJI Phantom: Ndiwo mambo weiyo yakasimba quadcopter. Izvo zvakanaka kutakura mhando yepamusoro kamera pachigadziko chayo kutora mifananidzo yakanakisa uye kurekodha yakakwira tsananguro yevhidhiyo. Mutengo waro wakakwira, asi zvakakosha mari kuti uwane mhinduro dzakanakisisa. Ndosaka chiri chinodiwa chevashandi vezvifananidzo. Parizvino, ivo vari kuenda kune yechina vhezheni, uye senge yapfuura, pane akasiyana senge zvakajairwa uye Pro uye Pro Plus, inodhura zvishoma, asi nekuwedzera.
DJI Inspire: imwe nhevedzano yedroni ine 4 mota uye simba rakakura uye kugona kuita zvinyorwa zvakanaka kwazvo mukufamba. Semuenzaniso, kutora matanho firimu mapfuti, tevera vanhu mukufamba, mota, nezvimwe.
DJI Goggles: mutengo wayo wakakwira zvishoma kupfuura iyo Spark, asi iri yakachipa pane Phantom naMavic. Iyi modhi yakanyanya kunaka kuti ishandiswe nemagogorosi eFPV, akagadzirirwa kuti uve neruzivo rwakakwana rwekubhururuka. Kufamba kwemusoro wako kuchachinja maitiro ekamera kuitira kuti iwe ugone kuona zvese panguva yekubhururuka. Nenzira, izvo hazvireve kuti izvo zvakapfuura hazvipindirane neFPV, chete kuti izvi zviri nani kusangana neiyi tekinoroji.
DJI Maindasitiri: iyi yakakosha nhevedzano yezvimwe zvinoshandiswa zvakanyanya. Vanogona kusimudza huremu hwakawanda nekuti kazhinji vanowanzoita anosvika masere rotor panzvimbo yeiyo chaiyo 8. Ivo anoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yekurima.
Unogona kutenga uye enzanisa chero eaya mamodheru mu DJI yepamutemo chitoro muchiSpanish. Iwe zvakare uchawana yakawanda nhamba yezvishongedzo (zvinotsigira, kamera, ...) kune ese akateedzana.
Iye zvino zvaunoziva maficha eDI modhiNgatiendei nePhantom 4, imwe yemhando yekorona zvishongo ...
Phantom 4 hwokugadzira hunhu
El yekupedzisira kujoina akateedzana anga ari iwo Phantom 4, ine hukuru hwekuvandudza pamusoro pemamodeli apfuura. Hunyanzvi hunhu hweiyi drone inonakidza.
Ndiyo inonyanya kukosha yeiyo Phantom 4 akateedzana, iine mashandiro akanaka uye ehunyanzvi maitiro andinodonongodza pano:
Ascent kumhanya: kusvika ku6m / s (zvinoenderana nemhepo mamiriro)
Kunonyanyisa kumhanya kwendege: inosvika ku72 km / h (zvinoenderana nemhepo mamiriro)
Kunonyanyisa kurerekera angle: inosvika ku42º (zvinoenderana nemhepo mamiriro)
Kunonyanyisa angular kumhanya: kusvika ku250º / s (zvinoenderana nemhepo mamiriro)
Kureba kwepamusoro: 5000m
Kunonyanyisa mhepo kuramba: 10m / s
Hupenyu hwebhatiri: 28 min approx. iine 5350mAh Li-Po bhatiri uyejaja yakaiswa
Inoshanda tembiricha renji: 0-40ºC
Geolocation system: GPS + GLONASS
Kudzikamisa: 3 masanhu
Kamera: 12.4 MP CMOS f / 2.8 kuzarura, nerutsigiro rweHDR uye UHD (4K)
Memory kadhi: inotsigira microSD inosvika ku64 GB UHS-1 kirasi
Remote control frequency: 2.4 Ghz (kure nerutsigiro rwemafoni nhare) Yakagadziridzwa Lightbridge
Zvinotadzisa kuona system: 5-nzira ine matatu maseru (kumberi, kumashure, pasi uye kumativi)
Mobile App yeMufananidzo Relay: DJI GO 4 yeIOS uye Android (ine 220ms latency)
Mutengo: approx. € 1100
La DJI Phantom 4 Pro vhezheni iyo yakavandudzwa vhezheni ine chekuita nechigadziko, iine zvimwe zvekuwedzera. Inosanganisira zvese zviri pamusoro pamwe:
Kureba kana kureba kukwirira: 6900 m
Hupenyu hwebhatiri: 30 min approx.
Kamera Inzwa: CMOS 20MP
Idzi gadziridzo dzinomiririra a kuwedzera kwemutengo kweanosvika € 500, kureva kuti, yaizove ne inofungidzirwa mutengo we € 1600.
La DJI Phantom 4 Pro Plus vhezheni Iko kugadzirisa pamusoro peiyo Pro vhezheni, uye nemutengo mudiki unowedzera pamusoro peiyo yapfuura. Iyo yekuvandudza, kusanganisira zvese izvo izvo base base Phantom 4 yaizove nayo futi, ndeiyi:
Chengetedza pfundo: pamwe neakaisirwa 5.5-inch skrini, inobvisa kukosha kwekushandisa nhare mbozha
Radio control frequency: unogona kushandisa 2.4 uye 5.8 Ghz kudzikisira kupindirana
Phantom 4 Yepamberi
El DJI Phantom 4 Yepamberi Iyo yakati siyanei zvishoma kubva kuPro.Iyo inogovera akawanda maficha neiyo Phantom 4, zviripachena, asi iine anotevera maficha anoisiyanisa iwo kubva kuPro:
Zvinotadzisa kuona system- Inongova neinodzivirira sensor kubva kumberi nekuzasi, asi inobvisa mamwe ese ma sensors kubva kumashure uye mativi. Naizvozvo, kana iwe ukasazvibata zvakanaka, zvinogona kukombana nemativi uye kumashure nezvipingamupinyi ... Ndiko kuti, inonyara yakaderera mune izvi kune iyo Pro.
Weight: 20g chakareruka
Naizvozvo, ndeimwezve sarudzo yakatarisana kune nyanzvi uye kuti ivo vanogonesa kuongorora kweaya maumbirwo zvirinani. Pane kudaro, mutengo uri pakati peiyo base Phantom 4 uye iyo Pro, ndiko kuti, isingadhuri sePro kana Pro Plus.
Phantom 4 Yepamberi +
Kana isu tikatora iyo Kumberi sereferenzi, iyo DJI Phantom 4 Yakawedzera Plus has chete mutengo weinenge € 100 yakakwira. Iwo maficha anenge akafanana. Chinhu chete chinosiyana ndechekuti:
Remote control: ine 5.5 ″ skrini inosanganisirwa
Sezvo nePro + ichienzaniswa nePro.
Kugadziridza pamusoro peiyo DJI Phantom 3
Kana iwe uchinetseka kuti sei iyo DJI Phantom 4 vs. Phantom 3, zviri nyore kutsanangura. Kana isu tichienzanisa iyo Phantom 3 Standard neiyo Phantom 4 base tine zvinotevera:
Kuzvimiririra: 23 min vs 28 min
Kurema: 768g vs 1380g
Kamera Inzwa: 12MP YakazaraHD CMOS vs 12MP 4K CMOS
Kubatana: WiFi vs Enhanced Lightbridge (inopfuura x4 kumhanya vs WiFi)
Mutengo: approx. € 728 vs approx. € 1100
Ehezve matekinoroji uye nzira dzekutyaira dzave nani. Muchidimbu, zvakaitwa yepamusoro drone uye mabhenefiti, kunyange iine huremu hwakanyanya. Muchokwadi, kune zvakare akawanda edhisheni eiyo Phantom 3, senge iyo Pro uye Advance. Kana isu tichifananidza maficha ePhantom 3 Pro, iwo akati fananei nekwatangira iyo Phantom 4, ndiko kuti, nhambwe yemamirimita mazana mashanu kubva kure uye 5000MP kamera ine 12K inokwana.
Nechikonzero ichocho, kana iwe uchitsvaga modhi yakafanana neiyo base Phantom 4, asi pamutengo unodhura, unogona tenga phantom 3 iyo ine mutengo wakaderera sezvo iri yechinyakare. Chinhu chega chakadzikira zvakanyanya ndiko kubatana pakati pedrone nemutongi, iyo yakavandudzwa zvakanyanya mu4.
Iyo yemberi DJI Phantom 5
Zvatinogona kutarisira kubva ramangwana DJI Phantom 5 Iyo Drone ine shanduko dzinoverengeka pamusoro peiyo 4. Kunyangwe iyo Phantom 4 ikozvino inomiririra pamusoro peiyo DJI renji, hazvizotora nguva kuti chizvarwa chinotevera chisvike. Kana isu tikatarisa kuvandudzwa kwe4 tichiremekedza iyo 3, isu tinogona kutarisira drone nekuvandudzwa mune akati wandei mapoinzi:
Autonomy- Iyo DJI Phantom 5 inogona kunge iine simba kupfuura iyo yechina, asi huwandu hwayo hunogona kunge huri nani. Zvichida mumaminetsi mashoma ichapfuura yazvino hafu yeawa yavanowanzo gara.
Kubatana: Panogona kuve nekuvandudzwa muhunyanzvi hweLightbridge, nekuti kana chikamu chekuona chikavandudzwa, chinongedzo chiri nani chingazodiwawo kudzivirira kunonoka uye kuti bandwidth iri pamusoro.
Kusvikira: Zvimwe iyo nyowani Phantom 5 ichaputsa iyo 7000m chipingamupinyi.
Camera- Iyo kamera ichave chimwe chezvinhu zvingashandure zvakanyanya, pamwe iine yakakwira FPS mwero we4K uye kunyangwe kugona kubata 8K.
Ndinovimba ndinemi akabatsira mukusarudza drone uye bvisa kusahadzika kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Drones » DJI Phantom 4: technical uye yekufananidza hunhu
NRF24L01: module yekutaurirana isina waya kweArduino
RJ45: zvese nezve network yekubatanidza